Grammar သင့်စမ်းသပ်မှုရမှတ် Impact နိုင်ပုံ
စစ်မှန်သောအသက်တာ၌သဒ္ဒါအမှားတွေပဲဖြစ်ပျက်သွားနေကြသည်။ ပင်အင်္ဂလိပ်ဆရာ, ဆရာမ - ငါတို့ရှိသမျှသည်အခြိနျမှနျမှအမှားတွေလုပ်! သင်ကဲ့သို့စံချိန်စံညွှန်းမီစမ်းသပ်တာဆိုရင်တော့ SAT , GRE , ACT , ပြည်နယ်စံစမ်းသပ်မှုနှင့်ပိုပြီးသို့သော်ဤသဒ္ဒါအမှားတွေအဓိကလမ်းအတွက်သင့်ရဲ့စမ်းသပ်ရမှတ်ပြန်ကိုင်ထားနိုင်ပါတယ်။ အနည်းငယ်အမှားများကိုသင့်ရဲ့စာမေးပွဲများ၏နှုတ်ဖြင့်အဘို့ကိုနှိမ့်ချခေါက်နိုင်ပါတယ်။
မကောင်းတဲ့ Pronoun / Antecedent သဘောတူညီချက်
သငျသညျရှေ့တျော၌ရှိသမျှကိုမြင်ရပါတယ်။ တစ်ဦးက နာမ်စား သူ, သူမ, က, သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့, သူတို့ကို, etc တူသောနာမ်၏အရပျကိုယူမယ့်စကားလုံးတစ်ခုကိုအစားထိုးသောနာမ် (အ antecedent) နဲ့သဘောတူညီချက်ထဲကဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ antecedent အနည်းကိန်းသို့မဟုတ်အပြန်အလှန်အခါဒီတစ်ခါလည်းနာမ်စားအများကိန်းဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်အများစုမှာဤကဲ့သို့သောမှားယွင်းမှုတစ်ခုခဲသိသာသည်။ ပြည်သူ့စကားပြောဘာသာစကားတွင်လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်မကောင်းတဲ့နာမ်စား / antecedent သဘောတူညီချက်ကိုအသုံးပြုပါ။ အသံကျယ်ဤသုံးပါးစာကြောင်းများထွက်ဆိုရမည်:
သူတို့က, ထိုကြောက်မက်ဘွယ်သောညာဘက်အသံမဟုတ်လော တစ်ဦးစံစမ်းသပ်မှုတွင်, သို့သော်သူတို့သည်သင့်အခါတိုင်းရပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေရာမှာတစ်ဦးနာမ်စား antecedent မေးခွန်းကို ACT ကဲ့သို့သောစံချိန်စံညွှန်းမီစမ်းသပ်အပေါ်တူနိုင်ယျ။ ယင်းတွင် ACT အင်္ဂလိပ်အပိုင်း ကိုသင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလိမ့်မည်ဟုဆိုသောစကားကိုမျဉ်းသားအစားစာလုံးမည်ဖြစ်ကြောင်းပေမယ့်, သငျသညျ, ဤကဲ့သို့သောမေးခွန်းတစ်ခုကိုရှာဖွေနိုင်ခြင်း:
မစ္စစမစ်ရဲ့အနုပညာအတန်းထဲတွင်ကျောင်းသားတစ်ဦးချင်းစီတဦးတည်းမိမိတို့ကိုယ်ပိုင် paintbrushes, သုတ်ဆေးနှင့်ပန်းချီစက္ကူထောက်ပံ့ရပါမည်။
သူသို့မဟုတ်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်: မှန်ကန်သောအဖြေကို B ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်? "တစ်ဦးချင်းစီက" ဝါကျ၏ဘာသာရပ်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်အနည်းကိန်းပါပဲ။ ဒါကြောင့်စကားလုံးအစားထိုးသည့်နာမ်စား "အသီးအသီး" လည်းအနည်းကိန်းဖြစ်ရပါမည်: သူသို့မဟုတ်သူမ၏။ ရွေးချယ်မှုက C တစ်ဦးအနည်းကိန်းနာမ်စားကမ်းလှမ်းသော်လည်း, စကားလုံးများ၏အသုံးပြုမှု "သူ၏" အားလုံးပါဝင်နိုင်မဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုပါဝါကျမစ္စစမစ်ရဲ့လူတန်းစားသာယောက်ျားလေးများ၏ဖွဲ့စည်းခဲ့ညွှန်ပြမထားဘူး။
တစ်ကော်မာ၏နေရာချထားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့တစ်နေ့တာကိုဖျက်ဆီးနိုင်တယ်, ကိုယ့်အပေါ်ကဥပမာထဲမှာဆင်းရဲသားကိုအဘိုးကိုစဉ်းစား! ကော်မာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ , ဒြပ်စင်ကွားဖွတျချွတ်တင်ထားရန်ကော်မာသုံးပြီးစီးရီးအတွက်ပစ္စည်းများအကြားကော်မာအားမရနှင့်ကြိုတင် (အခြားသူများအကြား) Conjunction ညှိနှိုင်းဖို့ကော်မာထည့်ကဲ့သို့တစ်ဦးအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။ သူတို့ကိုအလွတ်ကျက်။ သူတို့ကိုသုံးပါ။ ထိုသူတို့ကတစ်ဦးစံစာမေးပွဲတွင်အပေါ်အလွဲသုံးစားကြသောအခါအသိအမှတျပွုသင်ယူကြသည်။
ဒီနေရာမှာတစ်ဦးကော်မာမေးခွန်းကိုအပေါ်တူနိုင်ဘာ အတွက် SAT စာမေးပွဲ၏အရေးအသားအဘို့ကို ။ သငျသညျစမျးသပျလိမျ့ချင်ပါတယ်ထားတဲ့အပေါ်ဝါကျ၏အဘို့ကိုမျဉ်းသားအစားစာလုံးမည်ဖြစ်ကြောင်းပေမယ့်မေးခွန်းတစ်ခုကိုဒီအမျိုးအစားတစ်ခု "တိုးတက်စေူခင်းဝါကျများ" ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြစ်လူသိများသည်:
ခ Women 'အမည်များကိုယခုသူတို့ဖြစ်ကြသည်
C. အမျိုးသမီးအမည်များ; ယခုသူတို့ဖြစ်ကြသည်
ဃ Women 'အမည်များကိုယခုဖြစ်ခြင်း
C. အရှင်နောက်တစ်နေ့ဝါကျကလာရောက်ပူးပေါင်းတစ်ဦးပြည့်စုံအတွေးများ၏အဆုံးမှာကော်မာကိုသုံးပြီးသည်မှန်ကန်သောအဖြေကိုတစ်ကော်မာ splice သို့နှစ်ခုကိုပြန်သွားလေ၏။ သင်တစ်ဦးခက်ရပ်နားဖွဲ့စည်းရန်အကြားမှာရှိတဲ့ semicolon လိုအပ်ပါတယ်။ ရွေးချယ်မှု C နဲ့ E ကိုနှစ်ဦးစလုံးဟာ semicolon မှန်ကန်စွာအစားကော်မာသုံးသော်လည်း, ရှေးခယျြမှုကို C အဖြစ်ကောင်းစွာ, တင်းမာနေသင့်လျော်သောကြိယာကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်ရေးဖြစ်ပါတယ်။
မကောင်းတဲ့ "ဘယ်သူက / အဘယ်သူကို" အသုံးပြုမှု
ဒါဟာခွင့်တော်တော်လေးရိုးရှင်းလား အဆိုပါနာမ်စား, အမြဲတစ်ဘာသာရပ်နှင့်နာမ်စားဖြစ်ပါသည် "သူ", "အဘယ်သူကို" အစဉ်အမြဲ object တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လူတွေကဲ့သို့စာကြောင်းများဆိုသညျကား "ငါသည်ငါ့ application ကိုပေးသင့်ပါတယ်ဘယ်သူလဲ?" သို့မဟုတ် "အဘယ်သူသည်သင်တို့ဆီသို့ဘောလုံးကိုပေးခဲ့သလဲ" လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်။ Conversationally, သင်သည်ဤဘုံသဒ္ဒါအမှားထွက်သည်ကိုခေါ်ရမဖြစ်နိုင်ပါပဲ။ တစ်ဦးစံစမ်းသပ်မှုတွင်, သို့သော်, သငျသညျရမှတ်ဆုံးရှုံးတာပေါ့။
ဤတွင် "အဘယ်သူသည် / အဘယ်သူကို" မေးခွန်းအပေါ်တူနိုင်ဘာလဲ ACT အင်္ဂလိပ် အပိုင်း။ တနည်းကား, မေးခှနျးအတှကျစကားလုံးများကိုမြို့တော်မဟုတ်မျဉ်းသားမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါမျိုးနွယ်စုကခုန်ခဲ့ပါဘူးလျှင်, အဘို့ဆောင်သောပွဲသို့တက်ရောက်တော်မူသောဝိညာဉျအမျက်ထွက်ခြင်းနှင့်တိရိစ္ဆာန်များ, အစားအစာနှင့်နွေးထွေးမှုများအတွက်လိုအပ်သောလိမ့်မယ်, ဝေးနေဖို့လိမ့်မယ်။
မှန်ကန်သောအဖြေကိုခပုဂ္ဂလဒိဋ္ပုံစံအတွက်စကားလုံးက "ဝိညာဉျ" ၏အရပျတာ "သူ" ဟူသောစကားလုံးဖြစ်၏ ထိုသို့အပိုဒ်၏ဘာသာရပ်ပါပဲ။ ရှေးခယျြမှုကို C ကြိယာ၏တင်းမာနေပြောင်းလဲနှင့်မှားနာမ်စားတတ်၏။ ရှေးခယျြမှု D ကိုဝါကျတန်ရာစေသည်။
အထဲကအသံကျယ်သောဤစာကြောင်း Repeat: "ငါ, အသံစိတ်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ဖြစ်ခြင်း, ငါသည်ငါ့စကားအများကိန်းလုပ်ပေယျာလကိုထည့်သွင်းဖို့မလိုအပ်ပါဘူးကြောင်းအသိအမှတ်ပြုရန်ငါလေးနက်တည်ကြည်စွာကျိန်ဆို, ယခု မှစ. ထာဝရအဆုံးတိုင်အောင်အသို့မဟုတ်ငါသေအပေါ်သို့ (ပထမလာကိုမဆို။ ), ငါသည်ငါ့ပေယျာလအလွဲသုံးစားမှုစှနျ့လှတျပါလိမ့်မယ်။
မင်္ဂလာဆောင်မင်္ဂလာဆောင်မယ့်နေကြသည်မဟုတ်။ မွေးနေ့များမွေးနေ့ရဲ့မရှိကြပေ။ နှစ်ပတ်လည်နှစ်မြောက်ရဲ့မရှိကြပေ။ နာမည်ရဲ့ Christening ကြသည်မဟုတ်။ သငျသညျတိုင်းအများကိန်းစကားလုံးအဘို့ထိုသူတို့သုံးသုံးနေပါလျှင်တစ်ဦးကသေးသေးလေးပေယျာလတစ်စံချိန်စံညွှန်းမီစမ်းသပ်ပေါ်တွင်သင်၏တစ်နေ့တာကိုဖျက်ဆီးနိုင်ပါတယ်။
ဒီနေရာတွင်တစ်ခုပေယျာလမေးခွန်းကိုအပေါ်တူနိုင်ဘာလဲ ACT အင်္ဂလိပ်အပိုင်း :
တာယာ screeching နှင့်အနောက်ဘက်သို့သွားသောလမ်းကြောင်းအတွက်ဖန် shattering ၏တိုက်မှုအသံအဆိုပါအဝေးပြေးလမ်းမှာဖြစ်တယ်လို့၏အခြားဘက်မှာအရှေ့ခေါင်းနှစ်လုံးသုံးယောက်ဘတ်စ်ကားတော့ဘူး။
C. ဘတ်စ်ကား ''
မှန်ကန်သောအဖြေကိုကြောင်း B ကိုရွေးချယ်မှုထွက်အုပ်စိုးနှင့်တစ်ဦးအနည်းကိန်းနာမ်အများကိန်းနာမ်စားတစ်ခု antecedent အဖြစ်အလုပ်မလုပ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ C. ရွေးချယ်မှု: D "မမှန်ကန်ထို့ကြောင့်စကားလုံးက" ဘတ်စ်ကား "၏အများကိန်းတစ်ခုပေယျာလမလိုအပ်ပါဘူးအေဖြစ်ပါသည် ၎င်းတို့၏။ "
မကောင်းတဲ့အသုံးပြုမှု "ဒါဟာ၎င်း၏ / င်"
ပြီးတာနဲ့ခဏ၌, သင်က typing error တစ်ခုရှိသည်နှင့်မတော်တဆ "က၎င်း၏" (ကများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံ) နဲ့ ( "က" အကြားကျုံ့နှင့် "ဖြစ်ပါတယ်" သို့မဟုတ် "က" နဲ့ "ရှိပါတယ်") "ရဲ့" ကိုအစားထိုးပေလိမ့်မည်။ ဒါဟာအဆင်ပြေပါတယ်။ ကျနော်တို့နားလည်ပါတယ်။ တစ်ဦးစံစမ်းသပ်မှုတွင်, သို့သော် scantron တန်းကျောင်းသူလေးအတော်လေးအဖြစ်ထောက်ထားညှာထာသောမရှိကြပေ။ သူတို့အားဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ buggers ထွက်သည် Watch!
ဤတွင်မေးခွန်းကို SAT စာမေးပွဲ၏အရေးအသားအဘို့ကိုအပေါ်ကြိုက်နှစ်သက်နိုင်ကာ "က၎င်း၏ / ကန့်" ဘာလဲ။ ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဒီအမျိုးအစားတစ်ခု "ဝါကျအမှားဖော်ထုတ်ခြင်း" ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြစ်လူသိများသည်။ အဆိုပါ SAT တွင်, သငျသညျအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတတူသောဝါကျကိုတွေ့မြင်ချင်ပါတယ်။ မြို့တော်စကားလုံးများကိုမျဉ်းသားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်တစ်ဦးချင်းစီမျဉ်းအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစာတစ်စောင်ရှိသည်မယ်လို့။ သင်ကအမှားပါရှိသောကြောင့်မျဉ်းသားအဘို့ကို၏စာ၌ပူဖောင်းရန်ရှိသည်ချင်ပါတယ်။
Alexis သူမ၏အိမ်နီးချင်း THE မင်္ဂလာကြောင်ရုပ်မြင်သံကြားစီးပွားဖြစ် ON အနက်ရောင်ကြောင်ပိုင်ဆိုင်အလေးအနက်ဆိုသည်နှင့်, မယုံနိုင်လောက်အောင်ပါကအိုင်တီကိုယ်ပိုင် position နဲ့ဆက်ဆံမယ့်လုပ်ဆောင်! NO အမှား
အမှားက "ကန့်" နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဝါကျအပိုင်ပြသထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဟာ "က၎င်း၏" ဖြစ်သင့်သည်။
သင်တို့ပတ်လည်ကမ္ဘာကြီးကိုမှာ peek ယူပါ။ သငျသညျတွေ့ပါလိမ့်မယ်နီးပါးအရာအားလုံးအချိုးကျသည်။ သင်သည်သင်၏အစားအသောက်ကိုကာကိုလာမှလုပ်နိုင်, ကွန်ပျူတာ Screen, ကားတစ်စီး, ဒါမှမဟုတ်မျက်နှာတစ် hacksaw ယူလျှင်သင်သည်ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်ထဲမှာခွဲထွက်နေတဲ့အခါသူတို့သည်အသီးအသီးဘက်မှာနီးပါးတူညီနေကွောငျးတှေ့ရပါလိမ့်မယ်။ symmetry ကမ္ဘာကြီးကိုသွားလာရင်း '' ပတ်ပတ်လည်ကိုမှန်ကန်စေသည်။ တစ်ဦးစာရင်းထဲတွင်ပစ္စည်းများဆံ့ကြောင်းစာကြောင်းများလွန်းအချိုးကျဖြစ်သင့်သည်။ အဲဒါကဘာကိုဆိုလိုတာလား အခြေခံအားဖြင့်, စာရင်းထဲတွင်အချက်တွေကိုကိုက်ညီသင့်ပါတယ်။ တစ်အတိတ်တင်းမာနေကြိယာပထမဦးဆုံးအပိုဒ်ကစတင်ခဲ့သည်လျှင်, အတိတ်တင်းမာနေကြိယာနောက်လာမည့်စတင်သင့်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ပထမဦးဆုံးအနှစ်သက်ဆုံးလှုပ်ရှားမှု (ပြေး) ကိုဖော်ပြရန်တစ် gerund ကိုသုံးပါလျှင်, သငျသညျအရာကြွင်းလေကိုဖော်ပြရန်တစ် gerund ကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ် (ငါအပြေးကိုဖတ်ရှုခြင်း, ရေကူးကြိုက်တယ်။ ) ကဲ့သို့ "ငါသည်ရေကူး, ပြေးလိုနှင့်မယ်တစ်ခုခုဆို ကအပြိုင်ဖွဲ့စည်းပုံမှာကင်းမဲ့သောကွောငျ့ဘာ့ဂ်ပေါ်တွင် "စကားလုံးသည်သဒ္ဒါနည်းမမှန်ကန်ကြောင်းပါလိမ့်မယ်။
ဒီမှာကအန္တရာယ်အဖြစ်အပြိုင်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုင် GMAT နှုတ်ဖြင့် အပိုင်း။ မေးခွန်းတွေကဒီပုံစံဟာ GMAT ကမ်ဘာပျေါတှငျ "ဝါကျမှန်ကန်သော" အဖြစ်လူသိများကြသည်:
အဆိုပါ PGA Tour များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီရန်အလို့ငှာ, အယောင်ဆောင်ဂေါက်သီးတစ်နိုင်ငံလုံးခရီးစဉ်အရည်အချင်းပြည့်ကျောင်း, WIN မှာထိပ်ဆုံး 30 THREE အဖွစျအပကျြထားပါရန်လိုအပ်သည်, OR တစ်နိုင်ငံလုံးလှည့်လည်မယ့်ဝင်ငွေရရှိမှုစာရင်း၏ထိပ်ဆုံး 20 IN ပြီးဖို့။
A. အတစ်နိုင်ငံလုံးခရီးစဉ်အပေါ်သုံးဖြစ်ရပ်များအနိုင်ရ, ဒါမှမဟုတ်ထိပ် 20 ပြီးဆုံးရန်
ခထိပ်ဆုံး 20 ထဲမှာသုံးတစ်နိုင်ငံလုံးခရီးစဉ်အပေါ်ဖြစ်ရပ်များ, ဒါမှမဟုတ်ပြီးအနိုင်ရ
ထိပ် 20 သုံးတစ်နိုင်ငံလုံးခရီးစဉ်အပေါ်ဖြစ်ရပ်များ, ဒါမှမဟုတ်ပြီးအနိုင်ရ C.
ထိပ် 20 ပြီးသွားသည်တစ်နိုင်ငံလုံးခရီးစဉ်အပေါ်သုံးဖြစ်ရပ်များအနိုင်ရဃ
အီးတစ်နိုင်ငံလုံးခရီးစဉ်အပေါ်သုံးဖြစ်ရပ်များအနိုင်ရ, ဒါမှမဟုတ်ထိပ် 20 ပြီးဆုံးရန်
မှန်ကန်သောအဖြေကိုအဆိုပါဝါကျသုံးလိုအပ်ချက်များကိုစာရင်းပြုစုအီးဖြစ်ပါတယ်။ "အရပျသို့," "အနိုင်ရ" နှင့် "အပြီးသတ်ဖို့" အခြားပစ္စုပ္ပန်တင်းမာနေ၌တည်ရှိ၏နေစဉ်ပထမနှင့်နောက်ဆုံးကြိယာ, အ infinitive ပုံစံ၌ရှိကြ၏။ အဆိုပါဝါကျဒီတော့ကိုသာပထမဦးဆုံးစကားလုံးနှင့်အတူ, ဒါမှမဟုတ်သုံးခုစလုံးနှင့်အတူအသုံးပြုသည် "ရန်" ဟူသောစကားလုံးကိုပုံဖွဲ့စည်းခဲ့ရမည်ဖြစ်သည်။ ရှေးခယျြမှုအီးကိုက်ညီသောတစ်ခုတည်းသောအဖြေပါပဲ။
မကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာ / ကြိယာသဘောတူညီချက်
အချိန်အများစုမှာ modifiers အကြောင်းအရာကြိယာနှင့်အတူသဘောတူဖြစ်စေမဆုံးဖြတ်နှင့်အတူပြဿနာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်ဘာသာရပ်နှင့်ကြိယာကြား၌မှီဝဲ။ နှစ်ခုစကားများကြား၌ရှိသမျှသော junk ထွက်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်ဆိုပါကထွက်တွက်ဆဖို့အများကြီးပိုမိုလွယ်ကူပါလိမ့်မယ်!
ဒီမှာကအန္တရာယ်အဖြစ်ဘာသာရပ်ကြိယာသဘောတူညီချက်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုင် GMAT နှုတ်ဖြင့် အပိုင်း။ မေးခွန်းတွေကဒီပုံစံဟာ GMAT ကမ်ဘာပျေါတှငျ "ဝါကျမှန်ကန်သော" အဖြစ်လူသိများကြသည်:
ထိုကဲ့သို့သောလမ်းမြေပုံများ, ဟိုတယ်လမ်းညွန်, ဒါမှမဟုတ်အရာကြွင်းသမျှဧရိယာတည်နေရာအဖြစ်ခရီးသွားများအတွက်များအတွက်သတင်းအချက်အလက်, တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့လမ်းဘေးအကူအညီအစီအစဉ်ကိုလူသိများမော်တော်ကား Club, နေတဆင့်အခမဲ့ပေးပါသည်။
A. အရှည်လျားသည်၎င်း၏များအတွက်မသိ, မော်တော်ကားကလပ်ကနေတာဝန်ခံအခမဲ့ထောက်ပံ့ပေးနေကြတယ်
မှန်ကန်သောအဖြေကိုအဆိုပါသဘောတူညီချက်ပြဿနာ "သတင်းအချက်အလက်" နှင့်ကြိယာ, "ထောက်ပံ့ပေးနေကြတယ်" ဘာသာရပ်ကြားခသည်။ ရှေးခယျြမှု B ကိုတိကျမှန်ကန်သောသူတို့ကိုအနည်းကိန်းနှစ်ခုစလုံးကိုမှန်ကန်စေသည်။ ရှေးခယျြမှု D ကိုလည်းဒီမဟုတျဘဲ "က၎င်း၏" ဖို့ "သူတို့၏" သောစကားလုံး "ကလပ်" နှင့် "က၎င်း၏" အကြားနာမ်စား / antecedent သဘောတူညီချက်နှင့်အတူ messes သည့်နာမ်စားပြောင်းလဲစေပါသည်။ နှစ်ဦးစလုံးအနည်းကိန်းများမှာကတည်းကသူတို့ကလမ်းဆက်နေရန်ရှိသည်! ရှေးခယျြမှု E ကိုဝါကျ၏တင်းမာနေပြောင်းလဲသောလုံးဝကြိယာပုံစံကိုပြောင်းလဲစေပါသည်။
တစ်ဦးစမ်းသပ်ဘို့ CRAM မှနည်းမှန်လမ်းမှန်
အကောင်းဆုံး White ကဆူညံသံ Apps ကပ
Card များကိုတစ်ဦးအလှဆင်အတွက်4ဓမ္မရာဇဝင်ကိုအဘယ်သူဖြစ်ပါသလား
Perl Array ပေါ့ပ် () Function
ဆယ်ကျော်သက် Boys များအတွက်နွေရာသီစာဖတ်ခြင်းစာရင်း
SAT ရမှတ်များနှင့် ACT ရမှတ် Rhode Island ကောလိပ်များသို့ဝင်ရောက်ခြင်းများအတွက်
အေအိုင်ဒီအက်စ်သေဆုံးသွားသူ 10 ဦးပုံကိတ်စီး
2017-18 ဘုံလျှောက်လွှာစာစီစာကုံး Option ကို4- တစ်ဦးပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း
အဆိုပါနေ့ Times သတင်းစာ
ယောဟနျသဂျေးကောလိပ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
9-Ball ကို: တန်းပြီးတော့လူငယ်များသို့သိကောင်းစရာများပြီးတော့မဟာဗျူဟာ
ဂျာမန် Grammar စစ်ဆေးရမဲ့စာရင်း
သာ. ကောင်း၏အခွံမာသီး Place 10 သိကောင်းစရာများ
မမှန်ပြင်သစ်ကြိယာConnaître ( 'သိ') Conjugating
အီတလီအတွက် preposition "ကွန်း" ကိုသုံးပါဖို့ကိုဘယ်လို